My Oh My & Happy! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » My Oh My & Happy!	15
Posted by kai on Apr 10, 2016 in Arts & Humanities, Contributor, Columnist, Music | 15 comments
သိတာလေးတွေတင်ပေးကြပါဦး..။ ယူတုကသီချင်းလင့်ရယ်.. စာသားရယ်ပေါ့…။
ဘိုသီချင်း..။ ဂျပန်၊ စိန့်ပြည်..။ ကိုရီးယား..၊ ဗမာ..။ ကုလား.. ကြိုက်တာ..။ နှစ်ကူးနီးပြီမို့လေ…။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။
Rise up blinking in the sun
Wrapped in invisible wire
Something beautiful’s gonna come
Out from underneath our thumbs
To let freedom vibrate not ring
‘Cause we can’t listen to (listen to (listen to)) everyone
If we wanna hear ourselves sing
My oh my whatawonderful day we’re having…
Why oh why are we looking foraway outside it…
I see the green grass below
I feel the warmth of the screen
Is it beautiful (maybe not (maybe not)) but maybe so
Whatever keeps us singing
How long O Lord can you keep the whole world spinning under our thumbs…
kai says: Punch Brothers – “My Oh My”
kai says: Happy (From “Despicable Me 2”)
ခင်ဇော် says: ငင်… တဂျီး အစစ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားးး
kai says: ဗမာသီချင်းတွေထဲ.. နည်းနေသလားလို့. ကော်ပီသမားတွေကော်ပီရအောင်ပါ..။
ဟုတ်သားပဲ.. မဏ္ဍပ်မှာဖွင့်ရင်လည်းရသားပဲ.. ဖွင့်မှ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီ Post ကို အခုမှ ကြည့်မိတယ်။
နိုင်ငံရေး တွေ ရေး မစိုး လို့ အာရုံ လွှဲ သလား။
kai says: NLD အစိုးရဖြစ်… လေ့လာကြည့်သလောက်.. တော်တော်လည်းခိုင်နေပြီပဲ…။
အဆင်ပြေကြသလားမသိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ပလက်ဇီးဘိုး လားတော့ မသိ။ စိတ်ထဲ နဲနဲ မြန်လာသလို လို။ lol:-)))
မြန်မာပြည် က လူတွေ ရော ဘယ်လိုလဲ။
မြစပဲရိုး says: မြန်မာပြည် က Happy Song ပါ သူကြီး ရေ။
ကျွန်မ တို့ လူတွေလဲ ချို့ချို့တဲ့တဲ့လေး တွေ နေရ တဲ့ ကြားထဲ က ပျော်အောင် နေကြရရှာပါတယ်။
တစ်ခြားနိုင်ငံ က Happy Song ရိုက်ထားတာ နဲ့ ယှဉ်ကြည့် ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်လူတွေ နဲ့ ကိုယ့်ပြည် ကိုလဲ မကြာခင် တစ်ခြားနိုင်ငံ က မြင်ကွင်း တွေလို အဆင့်မြင့်လာပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကိုယ့် အတ္တတွေ ကို နောက်တန်းထားပြီး ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည် တိုးတက်ရေး၊ ကိုယ့်ပြည်သူ တွေ လူတန်းစေ့ နေနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းပေးကြပါ။
မြစပဲရိုး says: ဒါက အိမ်နီးချင်း ဗီယက်နမ် ပါ။ မြင်ကွင်း အဝတ်အစား၊ သန့်ရှင်းမှု ဘယ်လောက် ကွာတယ် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတောင်မှ မရှက်တတ်ကြ ဘဲ အိမ်ထဲ မှာရန်ဖြစ် ချင်နေကြသေးတယ်လား။ :-(((
မြစပဲရိုး says: ကျေးဇူးတရား ဆိုတာ သီချင်း တွေထဲ မှာလဲ ရှိပါတယ်။ ကြည့်တတ် ကြားတတ် မြင်တတ် ရင် လူသားတွေ ကြားထဲ မှာ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်ဖွယ် အရာ တစ်ခုပါ။
For giving it to me Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: ကြည့်ဖူးမယ်တော့ ထင်ရဲ့.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်က ခေတ်စားးတယ်.. က နည်းတွေကို ဟာသလုပ်ပြီးး ပြောင်ထားဒါ..
သီချင်းကတော့ နီယို နဲ့ ပစ်ဘူးးးရဲ့
Give me everything tonight ကို သုံးထားတာ.. က လို့ကောင်းတယ်…
Thint Aye Yeik says: ရွာထဲ ဝင်ရတာတော့ အရင်ထက် ပိုလွယ်နေသလိုလိုပဲ…
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကလားတို့ရပ်ကွက်ထဲ ဆိုတဲ့ သချင်းပဲ ကြိုက်တယ်
manawphyulay says: အဲဒါတွေ ဖွင့်ကြည့်လို့ပဲရတယ်။ ဒေါင်းလို့လည်း ရ၀ူး။ လိုချင်တာနော်…
အောင် မိုးသူ says: နားထောင်ကြည့်ဦးမယ်